Kooxda AC Milan oo 85 milyan kaydka gelinaysa kulanka SS Lazio (Eeg shaxda laga yaabo) – Gool FM
Kooxda AC Milan oo 85 milyan kaydka gelinaysa kulanka SS Lazio (Eeg shaxda laga yaabo)
(Roma) 09 Sebt 2017 – Ka biloow André Silva ilaa Kalinic iyo Calhanoglu waa laacibiin ka mid ah ilaa 11 xiddig oo ay xagaagan soo iibsatey kooxda Milan.
Yeelkeede, maaddaama xiddigaha qaarkood aysan weli jir ahaan diyaar ahayn, qaarna ay kasoo laabteen tartamada caalami, sidoo kalana maanka lagu hayo kulanka ay Milan ciyaarayso Khamiista ee EL waxaa khasab ah in laacibiin badani kaydka galaan kulanka berri ee Lazio.
Montella ayaa markale door bidaya Cutrone taasoo iyaduna ah sabab kale oo kaydka ku riixaysa André Silva (oo ku fahdiya 38 milyan oo euro) iyo Kalinic (oo Milan ugu fahdiya 25 milyan).
Jookarka reer Turkish ee Calhanoglu (oo lagu keenay 22 milyan oo euro) kaasoo aan weli xaaladdiisa jireen 100% ahayn ayaa isna kaydka fariisan doona, haddii lasoo gaabiyo, sida ku dhigan Premium Sport, kooxda Montella waxaa kaydka u fadhiya laacibiin ku fadhiya 85 milyan oo euro.
JUVENTUS VS CHIEVO: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Chamberlain oo keydka ku soo bilowday iyo tababare Klopp oo sharaxaad ka bixiyay sababta